Local Gold Prices Likely to Rise Gradually | Myanmar Business Today
HomeBusinessLocal Gold Prices Likely to Rise Gradually
Local gold dealers speculate that domestic gold prices will gradually show an upward trend reflecting the record high gold prices.
“On principle, local gold prices will go up in response to higher global gold prices. However, given the fact that greenback rates against Myanmar Kyats, the local gold price might not rise immediately but gradually, U Kyaw Win, President of Myanmar Gold Entrepreneurs Association told Myanmar Business Today.
Global gold price yesterday hitarecord high inadecade reaching $1,780 per ounce. In comparison, an ounce of gold was quoted at around $1,000 in the global market in 2009.
In the domestic market,atical (=16.3g) of 24K quality gold goes around K1.217 million and the exchange rate is K1,387 per dollar.
Industrial experts concluded that unchanged gold price in the domestic market is mainly due to lower demand, both local and international, and strong local currency.
There are around 10,000 gold shops in the Yangon gold market, where around 50 visses (1 viss = 1.63 kg) were traded daily. However, the market now has more sellers than buyers.
ကမ္ဘာ့ရွှေစျေး စံချိန်တင်မြင့်တက်လျက်ရှိရာ မြန်မာ့ရွှေစျေးသည်လည်း တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာ တော့မည်ဖြစ် ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ဝင်းက Myanmar Business Today ကိုပြောသည်။
“ကမ္ဘာ့ရွှေစျေး တက်ရင် မြန်မာ့ရွှေစျေး တက်မှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်လာစျေးကျနေတဲ့အခါ ကမ္ဘာရွှေစျေးလိုပဲ အများကြီးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူး တရိပ်ရိပ်ပဲတက်လာမှာ “ ဟု ဦးကျော်ဝင်းက ပြောသည်။
ကမ္ဘာ့ရွှေစျေးမှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ တစ်အောင်စလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ရာမှ ဆယ်နှစ်အတွင်း တစ်အောင်စလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇၈၀ နီးပါး စံချိန်တင် မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။
ပြည်တွင်ရွှေစျေးကွက်တွင် အခေါက်ရွှေ တစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ်ငွေ ၁၂၁၇၀၀၀ ရှိကာ အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် ကျပ် ၁၃၈၇ သာ လဲလှယ်နှုန်းရှိနေသည်။
ကမ္ဘာ့ရွှေစျေးမြင့်တက်နေသော်လည်း ပြည်တွင်း ရွှေတပြိုင်နက် လိုက်ပါမတက်နိုင်ခြင်းမှာ ပြည်ပအဝယ်အနည်းငယ်သာ ရှိခြင်း၊ ပြည်တွင်းဝယ်လိုအား နည်းပါးခြင်း၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာစျေးကျဆင်းခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များက သုံးသပ်သည်။
“ပြည်တွင်းကအရမ်းကြီးမတက်နိုင်ဘူး။ ပြည်တွင်းက ဒေါ်လာစျေးလည်းကျမယ်၊ ဝယ်အားလည်း သိပ်မရှိဘူး၊ အရမ်းတော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့။ တကယ်လို့ ကမ္ဘာစျေးက တောက်လျှောက်တက်နေရင်တော့ နည်းနည်းပါးပါးတော့ လိုက်တက်မယ်ပေါ့။ ကမ္ဘာ့ရွှေစျေး မတက်ရင် မြန်မာ့ရွှေစျေး မတက်ဘူး” ဟု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ဝင်းက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရွှေဆိုင်ပေါင်း တစ်သောင်းကျော်ခန့်ရှိပြီး ယခင်က တစ်နေ့လျှင် ရွှေပိဿချိန် ၅၀ ခန့် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ငွေလို၍ လာရောင်းသူတို့သာ ရှိကြောင်းသိရသည်။
Previous articleIndian Oil Company Invest Additional $120 Million in the Shwe Gas Project
Next articleIn the Time of Crisis, Protect Your Valuable Assets; It’s People